XUDUUDAHA COLLIE BERNARD DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Xudduudka Collie / Saint Bernard eeyaha isku dhafan ee isku dhafan
Bonbon the St. Bernard / Border Collie mix as a puppy at 2 bilood jir - 'BonBon waa aaladda loo yaqaan' St Bernard / Border Collie '. Wuxuu ku dhow yahay 2 bilood culeyskiisuna wuxuu ka sarreeyaa 5 rodol (2kg) sawirkan. Isku darka Bernard iyo Colorder Border waa mid la yaab leh oo eygayagu waa mid aad u qalafsan, si la yaab leh. Hooyadiis waa a purebred St. Bernard aabihiisna waa a purebred Border Collie . Dhogorta Saint Bernard oo ay weheliso Border Collie's timo dhaadheer oo siman ayaa abuuray dhar aad u qalafsan, suuf nacnac u eg oo aad u gaar ah.
Collie Border Saint
Saint Border Collie
St. Border Collie
Saint Collie Bernard
St. Collie Bernard
Soohdinta Collie Bernard maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Soohdinta Collie iyo Saint Bernard . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Bonbon the St. Bernard / Border Collie mix as a puppy at 2 bilood jir - Markii uu 7 toddobaad jiray ayuu durba ogaa sida loo fariisto . Wuxuu jecel yahay beerka inuu faafo wax ka badan. Isagu waxyar buu miisaankiisu yaryahay awgood cuntada doorbidida . Iyada oo ay taasi jirto, wali wuxuu umuuqdaa mid buuran sababo layaab leh KABATADA AAD U BADAN. Illaa iyo hadda, waxaan ugu dambeyn ku guuleysannay inaan ka dhigno inuu cunno cunno badan!
Bonbon the St. Bernard / Border Collie mix as a puppy at 2 bilood jir - Waan awoodnaa dibedda u kaxee sida ugu dhakhsaha badan dhakhtarkiisa xoolaha uu u siiyo dhamaan talaalkiisa. Dhakhtarkayagu wuxuu yidhi, wuxuu saadaalinayaa in Bonbon uu noqon doono GIGANTIC waana waxa aan dooneyno, eey aad u qalafsan oo cirif ah, oo u dabacsan sida Bernard, laakiin u dheereeya sida Collie.
Bonbon the St. Bernard / Border Collie mix as a puppy at 2 bilood jir - 'Bonbon wuxuu doorbidaa toy-ga saaxiibaday sida cunnadiisa toy-ka uu isagu ku ciyaaro alaabta lagu ciyaaro eeyga . '
Bonbon the St. Bernard / Border Collie mix as a puppy at 2 bilood jir iyadoo ku ruugaysa lafta eyga— 'Bonbon wuxuu helay deganaantii hooyadiis iyo firfircoonidii aabihiis, taas oo aan u maleyno inay tahay wax la yaab leh. Marnaba ma ogeyn inuu noqon doono kan quruxda badan waxaanan isku helnay a eey qoys kaamil ah . '
Liistada eeyaha Bern ee isku dhafan ee Saint Bernard
muqisho isku darka shaybaarka Eskimo Maraykanka
chihuahua oo lagu qasbay jiinis yar yar
4 bilood jir labrador puppy
sameynta alfa eeygaaga
sawirada cabsida ingiriisiga